Filtrer les éléments par date : mardi, 24 avril 2018
mardi, 24 avril 2018 23:11
Place du 13 Mai: Les Députés de l’opposition ont demandé à ce que le Président de la République dépose sa démission
Ils ont déclaré aller déposer une plainte au Palais de Justice Anosy, mercredi, contre les Ministres en charge des Forces de l’ordre et d’aller déposer une plainte à la Haute Cour Constitutionnelle contre le Président de la République.
mardi, 24 avril 2018 23:07
Lois électorales: Publication des dispositions desdites lois par la voie des médias
Le conseil du gouvernement, de ce jour, a décidé de procéder à la publication des dispositions des lois électorales, par la voie des médias, afin de dissiper les malentendus et autres supputations futiles.
mardi, 24 avril 2018 23:03
Oniversiten'i Mahajanga: Tsy mbola misy hevitra ny hiverenan'ny mpianatra amin'ny trano
Mbola ny Bloc miisa 5 amin'ireo tokony ho hasiana fanamboarana ihany no vita hatreto kanefa ny volana aprily no fe-potoana nomena ireo mpianatra sy ny Ray aman-dreny fa ahafahan'ireo mpianatra miverina ao amin'ny trano taorian'ny savorovoro sy ny fanadiovana noho ny aretina pesta.
Tsy mahazaka afa-tsy mpianatra 180 ireo efitrano nasiam-panamboarana ireo satria misy efitrano 6 ny Bloc iray ary vinavinaina ho mpianatra enina isaky ny efitrano.
Hatramin'izay, gaboraraka ny fitantanana ireo Bloc teny amin'ny Campus, nahatratra 12 isaky ny efitrano. Tsy mbola nisy fanamboarana kosa ireo trano eny amin'ny Cité Tsaramandroso ary na ireo compteur teny an-toerana aza very tsikelikely rehefa nesorina tsy nipetraka teny ireo mpianatra.
mardi, 24 avril 2018 22:41
Ambovoalana- Mahajanga: Sarona ny mpangalatra akoho gaigilahy
Efa ela no niandrasan'ny mpiara-monina amin'ity tovolahy ity, izay tena raindahiny amin'ny fangalarana akoho aman-borona fa izao vao sarona.
Mponina eny amin'ny fokontany Ambovoalana ihany ity tovolahy vao 18 taona ity ary efa tsikaritry ny manodidina fa izy ihany no manao mpamosavy malemy mamely ny manodidina.
mardi, 24 avril 2018 22:33
Ambositra: Feno hipoka Antamponivinany
Nisy io hariva io ny vavaka fiaraha-miory tamin’ireo namoy havana, izay notarihin'ny Pretra Katolika eto an-toerana. Manaraka akaiky ny zava-misy aty Antananarivo ny vahoakan'Ambositra ary manohana ny hetsika tarihin’ireo solombavam-bahoaka ho an’ny fiovana.
mardi, 24 avril 2018 22:27
Mampikony: Miakatra ny feo mitaky ny fialan’ny filohan’ny Repoblika
Nivoitra tamin’ny fanambarana iombonana nataon’ny avy amin’ny TIM, MAPAR, GFFM, Sojabe ary ankolafin-kery samihafa taorian’ny fivoriana nataon’izy ireo teto Mampikony androany tolakandro.
Naneho fiaraha-miory amin’ireo namoy havana teo Analakely-Antananario tamin’ny 21 aprily 2018 izy ireo, manameloka ny herisetra, mampahery ireo solombavam-bahoakan’ny fanovana ihany koa.
mardi, 24 avril 2018 22:18
Crise politique: Des va-et-vient des corps diplomatiques
De source informée, plusieurs ambassadeurs se sont vus faire des aller et retour entre le Palais présidentiel d'Iavoloha et les QG des leaders de grève, entre autre l'Union Europeene, l'Afrique du sud, les Britanques, l'ONU, l'Allemagne, les USA.
mardi, 24 avril 2018 19:21
Fianarantsoa: Tontosa ny famoriam-bahoaka ho fanazavana ny fehin-kevitra momba ny atrikasa tamin'ny herinandro
Notanterahina teo amin'ny kianjan'ny Magro Ampasambazaha ny fiantsoana ny vahoaka araky ny fotoana nifanomezan'ny mpitarika antoko Tambatra sy ireo mpiaradia aminy. Mpanao politika hafa ihany koa no hita teny an-toerana ka nanohana ny fampitana amin'ny vahoaka ireo antsimpirihany tsara ho fantatra momba ny fehin-kevitra tapaka tao anaty ny Atrikasa Nasionaly notontosaina teto Fianarantsoa ny herinandro lasa teo.
Miandry ny marina momba izany rehetra arak'izany.
mardi, 24 avril 2018 19:17
KMF/CNOE: Tsy misy afa-tsy ny fifidianana ao anatin’ny fitoniana ihany no vahaolana
Mitaky ny fampiharana ny lalàna amin’ireo tompon’antoka rehetra niteraka fandratrana sy ny famoizana ain’olona ny sabotsy 21 aprily 2018 teo ny KMF/CNOE.
Mitaky ny fifanatonan’ireo mpisehatra rehetra ara-pifidianana hifanakalo sy hifandinika ny ho amin’ny fanatsarana ireo lalam-pifidianana fototry ny disadisa ka hijerena izay hanatanterahana fifidianana azo itokisana sy hitondra filaminana ho an’ny firenena.
Ny KMF/CNOE dia mitaky ihany koa, araka ny fanambarana nataon’izy ireo, ny hampiharan’ny Mpitondra, ara-bakiteny, izay nambarany ny momba ny fisokafany amin’ny fifanatonana sy ny fifampidinihana ka tsy hangataka andro ary hanokatra sehatra amin’ny fanatanterahana izany.
mardi, 24 avril 2018 19:12
« Collectif des Professeurs Titulaires et Professeurs des Universités de Madagascar » : Tsy tombontsoan’ny Malagasy ny mbola hisian’ny kirizy lavareny eto Madagasikara
Fahavalo hiombonana, hoy ny fanambaran’izy ireo, ny fahantrana mianjady amin’ny firenena, koa miangavy ny ankolafin-kery politika rehetra eto amin’ny firenena mba samy hametraka ny hampombony, ka hiray latabatra mba hamahana aingana farany izay haingana ny olana ara-politika misy, mba hahafahana miroso amin’ny fifidianana madio sy mangarahara ary miainga amin’ny fanajàna ny Lalampanorenana.
Lalàm-pifidianana mikendry izay isian’ny fifidianana malalaka sy mangarahara, ihany koa hoy hatrany ny« Collectif des Professeurs Titulaires et Professeurs des Universités de Madagascar » no hahafahana mampisy fitoniana ara-politika eto amin’ny firenena. Fitoniana ara-politika izay ilaina hampiroborobo ny sehatra samihafa rehetra ho fampandrosoana ny firenena.